Mmiri na ebe nchekwa ụfụfụ ngwakọ matarasị
E nwere ọtụtụ ụdị matarasị dị iche iche n'ahịa, ụfụfụ, mmiri, matarasị ngwakọ. Mana teknụzụ ọhụụ na -ewepụta kwa afọ, kedu ka isi mara nke na -emezu ihe ị chọrọ, dị ka nro, ike, ma ọ bụ ụfụfụ ebe nchekwa, enyere smartphone aka? Ọtụtụ nhọrọ nwere ike ime ka ị nwee mgbagwoju anya. Otú ọ dị, ihe ị na -elekọta ndụmọdụ ndị a n'ezie: Ọ na -enyere gị aka ịrahụ ụra nke ọma? N'okwu, matarasị ndị dị n'ahịa n'ezie nwere ike ịhazi nke ọma dị ka oge opupu ihe ubi, ụfụfụ, na ngwakọ. Nke ọ bụla n'ime ụdị matarasị ndị a nwere ụfọdụ ihe pụrụ iche nke ị kwesịrị ịmara tupu ịzụrụ nnukwu ihe ọzọ.
Akwa matarasị mmiri bụ matarasị ọdịnala nke nne na nna gị nwere ike iji mee ihe nke ukwuu. Matarasị ụfụfụ nwere ọtụtụ ụdị, ha niile na -arụ ọrụ n'ịkwalite ogo ụra, inye nkwado ka elu, na ime ka ọ gbakee nke ukwuu n'oge ụra. Na mmezi nke matraasi, matarasị ọhụrụ ngwakọ ọhụrụ pụtara, nke na-eme dịka nhọrọ maka ndị nwere olileanya ịnwe ụfụfụ nchekwa na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ. Nnukwu ngwongwo ngwongwo bụ isi na-enweghị atụ na-ebu ụfụfụ dị elu. Ngwakọ bụ ezigbo nhọrọ maka ndị chọrọ ịnụ ụtọ ngwakọta nke nkwado mmiri mana na-ekwusi ike na ogo nke ụfụfụ nchekwa.
Mmiri na ebe nchekwa ụfụfụ hybrid matarasị 2.5cm ụfụfụ ebe nchekwa gel, obere okpomọkụ site na ntụtụ nke ihe jụrụ oyi. Spring2.0mm 18cm mmiri mmiri n'akpa uwe na-ama jijiji na-enye ahụmịhe ihi ụra enweghị nsogbu. Matarasị na igbe ohiri isi dị elu na ụdị ejiji paịpụ agba.
.Dị: Sulọ nkwari akụ; Ime ụlọ nkwari akụ; Ime ụlọ ime ụlọ
Ihe onwunwe: Mmiri; Akwa; Ụfụfụ ebe nchekwa
Aha ngwaahịa: Mmiri na ebe nchekwa ụfụfụ ngwakọ matarasị
Nọmba nlereanya: #M-SA01-03
Ọrụ: Ihe ndina ime ụlọ; Matarasị ngwakọ
Akụkụ(cm): Na-alụbeghị di; Zuru ezu; Nwanyị; Eze; Ngwaahia Size
Mbukota size(cm): Dabere na nha
Ibu ibu: Dabere na nha
Nkwakọ ngwaahịa Standard
Q: Kedu usoro ịkwụ ụgwọ?
A: Akwụkwọ ikike nke sofas bụ 2 afọ maka ime ụlọ, 1 afọ maka akwa akpụkpọ anụ; Matarasị bụ 10 afọ maka innerspring Ọdịdị.